Torohevitra efatra hikarakarana ny fitohanana amin'ny zaza | Bezzia
Maria Jose Roldan | 09/04/2021 22:00 | Ho an'ny zanakao lahy
Ny fitohanana dia olana ara-pandevonan-kanina mahazatra eo amin'ny zaza. Aza adino fa mbola mivoatra ny tsinainao ary ara-dalàna noho izany ny fanananao olana indraindray ka tsy vitanao ny mifoka ireo otrikaina samihafa avy amin'ny sakafo tsara. Ny zavatra mahazatra dia azo vahana io fitohanana io tsy misy olana be loatra ary manjavona araka ny nahatongavany.
Na izany aza, raha maharitra maharitra ny fitohanana dia zava-dehibe ny manatona dokotera hanamarina raha mijaly amin'ny karazana patolojia ianao. Avy eo izahay dia manolotra andiana fanafody na torohevitra izay afaka manampy ny kely hamaha ny olan'ny fandevonan-kanina.
1 Ampitomboy ny fihinanana fibre anao
2 Misotroa rano be
3 Manaova fanatanjahan-tena
4 Misotro ny vokatra vita amin'ny ronono masirasira
Ampitomboy ny fihinanana fibre anao
Ny fibre dia ilaina ary ilaina amin'ny resaka fisorohana ny zaza tsy hijaly noho ny fitohanana. Ny fibre dia tsy tokony ho tsy ampy amin'ny sakafon'ilay zaza ary tokony ho raisina tsy tapaka amin'ny sakafo rehetra izy io. Izy io dia misy amin'ny voankazo toy ny paoma na kiwi, amin'ny legioma na serealy. Raha ny mahazatra, ny fihinanana sakafo be volo amin'ny fibre dia manampy ny olana tsy fitohanana isan-karazany.
Misotroa rano be
Ny singa iray tena ilaina raha ny amin'ny fisorohana ny zaza tsy hijaly amin'ny fitohanana dia ny misotro rano mandritra ny andro. Zava-dehibe tokoa ny hijanonan'ny zaza hidradradradra tanteraka amin'ny fotoana rehetra ary aza mampiseho tsy fahampian'ny tsiranoka. Ny fihinanana rano dia manampy ny fivalanana hanalefaka ary afaka mivoaka ivelany tsy misy olana. Ny zava-pisotro atolotra dia tokony ho rano, ny fihinanana zava-pisotro mamy na ranom-boankazo dia tsy tokony hasaina satria tsy mitondra soa ho an'ny vatana izany.
Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia manakana ny fitohanana. Ny fampihetseham-batana dia manampy ny vatan'ny fotaka hahafahany hidina manerana ny tsinay tsy misy olana ary hamoaka ny seza amin'ny fomba mahafa-po. Ho fanampin'izany, ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena dia zava-dehibe amin'ny zaza mba hahatsapany tsara momba ny tenany sy hisorohana ny olana amin'ny kilao mihoatra ny kilao.
Misotro ny vokatra vita amin'ny ronono masirasira
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fitohanana amin'ny zaza dia mety noho ny tsy fisian'ny probiotika ao anatin'ny rafi-pandevonan-kanina. Ireo bakteria ireo dia misy amin'ny sakafo misy masirasira ary manampy mandray ireo otrikaina samihafa hita ao anatin'ny lalan-dra mandevon-kanina.
Amin'ny ankapobeny, ny fitohanana eo amin'ny zaza dia voavaha amin'ny fanarahana an'ity andiana toro-hevitra na fanafody voajanahary ity. Na izany aza, mety hitranga ny fikirizana na eo aza ny fanarahana ny torohevitra toy izany. Raha mitranga izany dia tokony manatona dokotera ny ray aman-dreny mba hahitana ny antony mitohy na miziriziry ny fitohanana ary avy eo, mihetsika amin'ny fomba mety indrindra. Amin'ny tranga toy izany, ny zaza dia mety hijaly karazana patolojia izay manakana azy tsy hanana fivezivezena tsinay ara-dalàna. Ity olan'ny fandevonan-kanina ity matetika dia voavaha amin'ny alàlan'ny fitantanana fanafody sasany izay manampy ny fizotran'ny fandevonan-kanina ho tonga lafatra. Raha tsy izany, ny kely dia afaka manana fizarana fitohanana tsy tapaka miaraka amin'ireo ratsy rehetra aterak'izany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ho an'ny zanakao lahy » Torohevitra efatra momba ny fitsaboana ny fitohanana eo amin'ny zaza
Zavamaniry 5 lava anaty trano handravahana ny zoron-tranonao